Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaliya oo ka hadlay Dagaalka Bariire iyo Oowdheegle | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaliya oo ka hadlay Dagaalka Bariire iyo Oowdheegle
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaliya oo ka hadlay Dagaalka Bariire iyo Oowdheegle
Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, ayaa cambaareeyay weeraradii shalay lagu qaaday fariisimaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin magaalooyinka Bariire iyo Awdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Kooxda Al-shabaab oo dagaal kula jirta ciidamada DF iyo kuwa AMISOM ee taageeraya ayaa fulisay weeraradan oo geystay khasaare baaxad leh ayaana ka dhashay
“Waxaan si adag u cambaareyneynaa weeraradan lagu bartilmaameedsaday ciidamada Soomaaliya. Tani waa mid si cad inoo xusuusinaysa naf-hurnimada maalin kasta ay sameeyaan askarta Soomaaliyeed ee sida geesiminada leh u dagaallama si ay u badbaadiyaan Soomaaliya iyo dadkeedaba,” ayuu yiri Md. Swan. “Waxaan ka tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay, waxaana caafimaad deg deg ah u rajeynaynaa dadkii ku dhaawacmay.”
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarada, waxaana lagu soo waramayaa in qasaaro lixaad leh uu ka soo gaaray talaabada adag ee ay qaadeen Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyee
Previous articleFadeexad kusoo baxday Xog-hayaha Joogtada ah ee Xafiiska Ra’iisul Wasaare Rooble !!
Next articleShirka Madaxda Soomaalida uga socda Afisooni oo maalintii Labaad wax Natiija la aan ku idlaaday
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo gaarey magaalada Addis Ababa ee...
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa gaarey magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Madaxweynaha Koonfur galbeed...
Dil ka dhacay Degmada Afgooye